TaiG ichagadzirisa Jailbreak nhasi kuita Cydia Substrate inoenderana | IPhone nhau
TaiG ichagadzirisa Jailbreak nhasi kuti Cydia Substrate ienderane
Sezvaunoziva, iyo TaiG timu yakaburitsa iyo iOS 8.3 Jailbreak chishandiso nezuro, zvisinei, Cydia Substrate yanga isingaenderane nemazhinji tweaks uye shanduko dzaisashanda nemazvo. Pakutanga takafunga kuti Saurik ndiye angave anodzikira kuzoshanda kugadzirisa dambudziko iri, asi Zvinotaridza kuti TaiG ichafanirwa kugadzirisa iyo jailbreak kernel kuti iite 100% inowirirana neCydia Substrate zvakare. Zvinoenderana neruzivo rwekupedzisira kubva kuChina, vari kuronga kuzviita nhasi.
Chikwata cheTaiG chakazivisa Cammy H we iDigital Times izvo Ivo vachaburitsa inogadzirisirwa yavo Jailbreak nhasi iyo ichagadzirisa dambudziko neCydia Substrate. Vachaburitsa patsva pasuru kuburikidza neOTA (kana zvakadaro zvinotarisirwa) kuitira kuti vashandisi vakatogadzira Jailbreak vachishandisa TaiG 2.0 vanogona kugadzirisa dambudziko rimwe chete vasina kuJailbreak zvakare, kunyangwe zvichiri kuzivikanwa kuti iyi update ichave iri kuburikidza nekubatana nePC kana zvingasadaro.
Mamwe matambudziko anotarisirwa kuti agadzirise ndeyekupokana jam iyo chishandiso cheJailbreak chinowanzotambura kana ichisvika 20% yemaitiro, kumanikidza vamwe vashandisi kurodha iTunes vhezheni 12.1.2 kana 12.1.0 ine yepamusoro kuenderana. Zvisinei, hapana chinhu chakataurwa kubva kuTaiG pamusoro pazvo, kana kusimbisa kana kuramba dambudziko rekuenderana.
Tichave takamirira zuva rese kuti tizivise nekukurumidza sezvazvinogona kuita nyowani yeCydia yekuvandudza pasuru nechinangwa chekuti munhu wese agone kunakirwa neJailbreak mukuzara kwayo nekukurumidza sezvazvinogona, zvisinei, isu tichiri kumucheto kune vashoma vanoziva ruzivo vanosvika kubva TaiG. Zvinotaridza kuti vashanduri veChinese vakamhanyirazve kuita kwavo, kunyanya kana iOS 8.4 yave padyo kwazvo. Ticharamba tichizivisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Jailbreak » Cydia » TaiG ichagadzirisa Jailbreak nhasi kuti Cydia Substrate ienderane
Kuti maChinese akangwara kwazvo. Imwe yevaviri: kungave ivo vakaona kuti yavo JB yanga isiri yeiyo iOS 8.4, kana ivo vanoziva zvechokwadi kuti Apple haina nguva yekushandura kuburitswa kweIOS 8.4 yakagadzirirwa Chipiri chinotevera, kuvhara maburi. Pane mukana wechitatu, asi watove kupenga: kuti vakazviburitsa vachitya kuti zvimwe zvikwata zvichafambira mberi, uye vorasikirwa nemari iyo vangadai vakaikunda.
Ndati, rarama kwenguva refu TaiGJBreak !! Nakidzwa nazvo, uye zvishoma paranoia.
Ndinobvumirana zvachose ……
Edgar garcia akadaro
Pindura Edgar Garcia
Javier Gonzalez akadaro
Pindura Javier González
Jonathan Segovia akadaro
Pindura kuna Jonathan Segovia
Cydia inogadziridza naSaurik, isati iri iyo Substrate… Jun 24, 20:15
Pindura kuna PERIMAD
ZVINONYANYA KUSANGANISIRA KUDZIDZISA ZVIMWE ZVINOGONESESA PASI PAPA NE 100% INVASIVE KUSHANDISA. Nehurombo, ndanga ndichitarisa kune ino peji kwemakore mashoma kubvira ini ndaiwanzo kutarisa iphoneate.com uye nechikonzero chimwe chete chandaifanira kutamira pano. Kupinda kubva kune nhare kunoita kuti zvikwanise kuverenga nyaya nhau usati watanga kuvhura rimwe kana maviri mapeji ekushambadzira.
Zvakare, ini ndinoomerera kuti iyo nhau kubva kuna Cristina Torres, kana isiri kopi / pasita yeimwe peji, ine hombe yezvinyorwa zvemakanganiso zvinoita kuti mamiriro acho atonyanya kunakidza. Pamusoroi asi zviri pamutemo kubva nhasi handirambe ndichipinda muwebhusaiti iyi, mumwe munhu anoziva peji rine hunhu kutamira ???
Ndiri Harlem Arias akadaro
Pindura kuna Soy Harlem Arias
Devin Malon akadaro
Pindura Devin Malon
Kuti iyo Apple haina nguva yekuvhara jai kuIOS 8.4 ... chinhu chisina maturo ... panguva yetaig vachikanda gomba rakavharwa ... pavanotadza, inongova iOS 8.4 iri yakavhurwa ... asi sezvo ini ndisati ndanzwisisa ... del jai yeIOS 8.4 ... ndinofunga k taig yatanga jai kare ... sei waona k yeIOS 8.4 isingashande ... kana zvakare nekuti k hapana ari pamberi pavo.
Pindura kuna Evasi0n
Pandinoda kurodha pasi itunes64setup.exe chaizvo, ndinowana «Iyo vhezheni yeiyi faira haienderane neshanduro yeWindows yauri kumhanya nayo. Tarisa iyo system ruzivo rwecomputer yako kuti uone kana iwe uchida iyo x86 (32-bit) kana x64 (64-bit) vhezheni yechirongwa, wobva wabata mutengesi.
Pindura kuna stefano
Tenga kana chengetera iyo Apple Watch muSpain, zvese zvaunoda kuti uzive
Maitiro ekubvisa PIN pane iPhone